संसारमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै, नेपालमा बढ्दै ! - Nayabulanda.com
संसारमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै, नेपालमा बढ्दै !
२ श्रावण २०७५, बुधबार ११:०३ 59 पटक हेरिएको
काठमाडौं – विश्वमै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ताले भने साउन १ देखि थप महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। अन्य मुलुकमा इन्टरनेट सेवामा नयाँ प्रविधि र सस्तो मूल्य बनाउन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला सरकारले भने यसलाई राजस्वको स्रोतको रुपमा हेरेको देखिन्छ। सरकारको यो कदमलाई विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत उल्टो बाटो हिँडेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
‘सरकारले इन्टरनेटमा थप शुल्क लगाउनु राम्रो होइन। यो प्रत्युत्पादक छ,’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत पनि हो।’
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पु-याएको छ। यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा र मोबाइल डाटा प्याकमा समेत लागू गरेकाले एकैपटक भ्वाइस र इन्टरनेट शुल्क बढ्न लागेको हो।
सरकारले लगाएको थप शुल्कको विषयमा अझ स्पष्ट हुन नसकेकोले थप छलफल गर्न आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । भ्याट लगाउनुभन्दा अघिको मूल्यमा १३ प्रतिशत जोड्ने भनिए पनि जडान शुल्क लगायतमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको बोहोराको भनाइ छ।
सरकारले बढाएको इन्टरनेट शुल्क मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीति विपरीत भएको बोहोराको भनाइ छ। ब्रोडब्यान्ड नीतिमा सस्तो र गुणस्तरीय मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारले बढाएको शुल्कको विषयमा छलफल गर्न संघका पदाधिकारी अर्थ मन्त्रालय गए पनि सरकारले घटाउने विषयमा चासो नदिएको भेटमा संलग्न एक व्यवसायीले बताए।
यसअघि सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क भ्वाइस कलमा मात्र लगाउँदै आएको थियो। यस वर्षदेखि सरकारले यो शुल्क माबोइल डाटा प्याकसहित सबै इन्टरनेट सेवामा लगाउने घोषणा गरेको छ।
यसअघि ११ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको आर्थिक विधेयक २०७५ मा उल्लेख छ। ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल उपर गर्नु पर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ।
२०७२ को शक्तिशाली भूकम्पअघि यस्तो शुल्क १० प्रतिशत थियो। भूकम्पपछि मुलुकभरमा क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुर्नर्निमाणलाई रकम जुटाउने भन्दै सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर थप गरी सम्पदा कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन गरेको थियो। सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको एक प्रतिशत सम्पदा कोषका लागि संकलन गर्ने भएपछि उक्त दस्तुरलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर ११ पु¥याइएको थियो।
त्यसैगरी, एनसेलले पनि भ्वाइस सेवा र डाटामा साउन १ देखि मूल्य समायोजन गर्ने भनेर ग्राहकलाई आफ्नो सेवामार्फत जानकारी गराइसकेको छ। एनसेलले पनि सरकारले बढाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अनुसार भ्वाइस सेवामा थप दुई प्रतिशत र डाटामा १३ प्रतिशत बढ्ने जनाएको छ।
सरकारले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बढाएको छ। टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत एक हजार रुपैयाँ असुल गर्ने आर्थिक विधेयक २०७५ मा उल्लेख छ। टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क असुल गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यो दस्तुरलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर सहित राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ। दाखिल गर्नुपर्ने दस्तुर म्यादभित्र नबुझाएमा त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।